ရှနေ့ကွေီး ဦးကိုနီကိုသတျတဲ့အမှု နပွေညျတျောတရားလှတျတျောခြုပျက အပွီးသတျ အမိနျ့ခမြယျ – Voice of Myanmar
တရားလှတျတျောရှနေ့ဦေးကိုနီနဲ့ အငှားယာဉျမောငျး ဦးနဝေငျးတို့ကို သတျတဲ့အမှု စီရငျခကျြကို နပွေညျတျောတရားလှတျတျောမှာ ပွငျဆငျမိနျ. တကျထားတဲ့ကိစ်စ ၁၀/၁/၂၀၂၀ မနကျ ၉း၃၀နာရီ မှာ နပွေညျတျောတရားလှတျတျောခြုပျမှာ အပွီးသတျအမိနျ့ခမြှတျမှာဖွဈတယျလို့ ဒီအမှုကို လိုကျပါဆောငျရှကျပေးနတေဲ့ ရှနေ့အေသိုငျးအဝိုငျးက သိရပါတယျ။
ဒီအမှုမှာ ပါဝငျပတျသကျတဲ့ တခွားတရားခံ ဇယြောဖွိုး ကိုတော့ ၅နှဈ ၊ အောငျဝငျးထှနျး ကို ၃နှဈခမြှတျတာဟာ လုပျရပျထကျ ပွဈဒဏျဟာ နညျးနတေဲ့အတှကျ ခုလိုနပွေညျတျောတရားလှတျတျောကိုထပျမံလြှောကျထားခဲ့တာမို့ ဒီကနေ့ အပွီးသတျခမြှတျမှာဖွဈပါတယျ။
ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီကိုသတ်တဲ့အမှု နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က အပြီးသတ် အမိန့်ချမယ်
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီနဲ့ အငှားယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်းတို့ကို သတ်တဲ့အမှု စီရင်ချက်ကို နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်မှာ ပြင်ဆင်မိန်. တက်ထားတဲ့ကိစ္စ ၁၀/၁/၂၀၂၀ မနက် ၉း၃၀နာရီ မှာ နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာ အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဒီအမှုကို လုိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေအသိုင်းအဝိုင်းက သိရပါတယ်။
ဦးကိုနီနဲ့ ဦးနေဝင်းဟာ ၂၉/၁/၂၀၁၇ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ သေနတ်သမား ကြည်လင်းရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေနတ်သမား ကြည်လင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ကြံစည်သူ အောင်ဝင်းဇော်တို့ နှစ်ဦးကို မသေမချင်း ကြိုးကွင်းစွပ် သတ်ရန် ၂၀၁၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ တခြားတရားခံ ဇေယျာဖြိုး ကိုတော့ ၅နှစ် ၊ အောင်ဝင်းထွန်း ကို ၃နှစ်ချမှတ်တာဟာ လုပ်ရပ်ထက် ပြစ်ဒဏ်ဟာ နည်းနေတဲ့အတွက် ခုလိုနေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ကိုထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့တာမို့ ဒီကနေ့ အပြီးသတ်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ဦးကိုနီ #ဦးနေဝင်း #ကြည်လင်း
Breaking News, မွနျမာသတငျး, သတငျး